Yakachipa Chinese mugadziri CNC yakasarudzika kabhoni simbi yakagezwa zvikamu fekitori nevatengesi Ouzhan
Chinese mugadziri CNC yetsika kabhoni simbi yakagezwa zvikamu
Carbon simbi CNC yekugaya ine huwandu hwakawanda hwekushandisa uye inokodzera kwakawanda mamishini zvikamu. CNC lathes inogona kugadzirisa yakaoma kutenderera maumbirwo emuviri. Kune kabhoni simbi yekugaya zvikamu, iyo isina kugadzika yakagadziriswa, uye yekumhanyisa-inomhanyisa inotenderera yekugaya yekucheka inoshandiswa kufambisa iyo isina chinhu pane isina chinhu kucheka zvinodiwa maumbirwo uye maficha. The azvikuya zvikamu machine centre iri chaizvo akakodzera kugadzira workpiece mhando dzakadai rakakombama zvikamu uye curved tooling maturusi. Yakakombama zvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda weindasitiri, senge turbine mashizha, ngarava dzinofambisa, zvigadzirwa zvemaindasitiri zvine cylindrical conical huso, nezvimwe. Ouzhan inopa yakagadziriswa kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvemuchina masevhisi kune anokosha vatengi.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan kabhoni simbi yakakora zvikamu:
Pashure: CNC hwokugaya kabhoni simbi zvikamu
Zvadaro: Yakagadziriswa kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu